Semalt ले चीन र युरोपमा इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य बीचको भिन्नताहरू वर्णन गर्दछ
इ-कमर्स मा सफल हुन, डिजिटल मार्केटिंग को केहि महत्वपूर्ण पक्षहरु छन् कि ध्यान आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, कुनै पनि अनलाइन व्यापार एक मजबूत अनलाइन ब्रान्ड उपस्थिति मा निर्भर गर्दछ। यो उपस्थिति सामाजिक नेटवर्क वा SERPs मा हुन सक्छ। खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) ले खोजी ईन्जिन नतीजाहरूमा वेबसाइटको स्तर सुधार गर्दछ। त्यस्तै डिजिटल सोशल मार्केटि techniques तकनीकहरू जस्तै सोशल मिडिया मार्केटिंग (एसएमएम) ले ई-कमर्स व्यवसायका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्न सोशल मिडियामा ब्रान्डको दृश्यता बढाउन मद्दत गर्दछ।
यद्यपि, ई-कमर्स विभिन्न देशहरू र क्षेत्रहरूमा समान हुन सक्दैन। उदाहरण को लागी, चिनियाँ e-वाणिज्य व्यवसाय र युरोपियन कम्पनीहरु बिभिन्न भिन्न हुनेछन्। यसबाहेक, एक प्रविधि, जुन एक देशमा प्रचार गरिएको छ, अर्को देशमा लागू हुँदैन।
रायन जोनसन, Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, व्याख्या गर्छन् कसरी युरोपमा इ-कमर्स चीनमा भन्दा फरक छ।
१. अवस्थित मोडेलहरू
युरोपमा प्राय जसो कम्पनीहरू स्वतन्त्र खुद्रा स्टोरहरू हुन्। तिनीहरू घरमा B2B मोडेल प्रयोग गर्छन्। इ-कमर्स सीधा उपभोक्ताहरूको लागि अनुकूलित गर्न सकिन्छ किनभने कम्पनीहरूले धेरै पक्षहरू समावेश गर्दैनन्। जब यस्तो वेबसाईटको लागि ई-वाणिज्यलाई अनुकूलन गर्ने गर्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरू जस्तो मुद्दाहरूको लागि विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण छैन।
यद्यपि चीनमा अवस्था एकदम फरक छ। चीन एक औद्योगिक देश हो। तिनीहरूको धेरैजसो व्यवसायहरूले अन्य बजारहरू सेवा गर्दछन् र सीमा पार बजारमा भारी निर्भर छन्। तिनीहरूको गतिविधि मोडलहरू जस्तै B2C लाई सूचीको आवश्यक पर्दैन। चीनसँग स्थिर वित्तीय प्रणाली छ जसले सबै घरेलु लेनदेनहरूलाई मात्र समावेश गर्दैन तर अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूसँग भुक्तान पनि सुनिश्चित गर्दछ।
यूरोपमा, परम्परागत डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रियाहरू एसएमएम र एसईओ सामिल छन्। ईमेल मार्केटिंग र ग्राहक अनुभवको प्रतिक्रिया यूरोपमा उत्कृष्ट छन्। प्राय: पटक, ब्लगरहरूले ग्राहक टोनहरू प्राप्त गर्छन् र धेरै इच्छुक उपभोक्ताहरूसम्म पुग्छन्। अनलाइन मार्केटिंग प्रक्रियाहरूले स्थानीय ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्दछ, विशेष गरी Google मेरो व्यवसाय र Google नक्सा मार्फत।
यद्यपि चीनको मुख्य डिजिटल मार्केटिंग विधिले सामाजिक मिडिया, ब्यानरहरू, र ईमेल मार्केटिंग समावेश गर्दछ। अधिकांश चिनियाँ व्यापारीहरूले अमेजन जस्ता ठूला स्टोरहरूलाई लक्षित गर्छन् र धेरै ड्रप शिपिंग सेवाहरू प्रस्ताव गर्छन्।
The. वेबसाईटको सामग्री
यो यूरोप को लागी वेबसाइट सामग्री अनुकूलन गर्न केहि प्रयास लिन सक्छ। उदाहरण को लागी, यूरोपियन देश मा ई-वाणिज्य कम्पनीहरु उपभोक्ताहरु लाई लक्षित। वेब पृष्ठहरू सफा र परिभाषित हुनुपर्दछ, आगन्तुकहरूलाई सूचित गर्दै कि न्यूनतम प्रयास प्रयोग गरेर कसरी खरीद गर्ने। यी वेबसाइटहरू एक व्यक्ति बनाउन मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, जसले चासो देखायो, एक खरीद।
अर्कोतर्फ, चीनमा अवस्था एकदम फरक छ। SEO खरीद गर्नका लागि आकर्षित गर्नका लागि गरिएको छैन। तिनीहरूको वेबसाईटहरूले अत्यन्त लामो सामग्री पृष्ठ, गृह पृष्ठ, कोटी, र उत्पाद पृष्ठ समावेश गर्दछ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको ग्राहकहरूको लागि पूर्ण उत्पादन कभर गर्नु हो जसलाई ठूला अर्डरहरू आवाश्यक पर्न सक्छ। परिणाम स्वरूप, उनीहरूको वेबसाइटहरू प्राविधिक रूपमा लक्षित छन्।
इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य एक जटिल क्षेत्र हो जसमा धेरै कार्यनीतिहरू समावेश छन्, जुन प्रत्यक्ष छैनन्। लक्षित विज्ञापन र इष्टतम वेबसाइट प्रदर्शन जस्ता धेरै विधिहरू, तपाइँको वेबसाइटलाई अनलाइन सफल बनाउन सक्छ। यद्यपि डिजिटल मार्केटिंग टेकनीक सार्वभौमिक छैनन्। के एक देश मा काम गर्न सक्छ अर्को देश मा के काम गर्दछ हुन सक्दैन।